Mety ho Alfred Kinsey-n’i Rosia Ve i Snowden? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2014 8:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 日本語, Deutsch, English
Snowden ve no ho Alfred Kinsey amin'ny vanim-potoana maoderina? Sary namboarin'ny mpanoratra.
Edward Snowden no Alfred Kinsey amin'ny vanim-potoanan'ny aterineto. Izany no nambaran'ilay mpanao gazety Rosiana Dmitri Gubin tamin'ny lahatsoratra bilaoginy tamin'ny herinandro lasa, mandinika izay mety ho fiantraikan'ny fanarahamaso faobe ataon'ny governemanta eo amin'ny fenitra ara-tsosialy hoavy.
Malaza amin'ny fikarohana nataony nanomboka tamin'ny taona 1950 mikasika ny fitondrantena ara-pananahan'ny olombelona i Kinsey, izay nanampy tamin'ny revolisiona manohitra ny fisainana ara-pananahana nentim-paharazana tao amin'ny firenena Tandrefana. Nahatafita ny tolony i Kinsey noho ny fampiharana fomba siantifika henjana tamin'ny fandinihana ny fananahana, izay tontosa noho ny fananana tahiry marobe.
Tao amin'ny lahatsoratra bilaoginy, manontany i Gubin raha mety hanova ny fahalalana iombonana vaovao momba ny fitondratenan’ olombelona ireo Tahiry Goavambe nangonin'ny governemanta nandritra ny fitsikilovana ny Aterineto, avy amin'ny fandaharan'asa PRISM an'ny NSA na SORM an'ny FSB.
Impiry mitsikera ny manampahefana isika? Miteny ratsy? Mitomany? Impiry mihemotra amin'ny tenintsika sy ny fihetsitsika? Impiry mimamo hampanadino? Mitabataba? Mialona? Impiry miova hevitra eo amin'ny fiainana? Tsy maninona ve izany ny miova raha izany?
Raha manana valiny amin'ireo fanontaniana ireo isika, dia azo atao ny mihevitra indray ny fijerintsika momba ny tenantsika. Ary afaka manova ny zorom-pijerena amin'izay ekena sy melohina, rehefa mitodika amin'ny tombontsoan'ny besinimaro, izany hoe, mijery ny fitondrantena anivom-piarahamonina. Ary ho mpiaramiasa tsinahy amin'izany ny FSB amin'ny SORM sy ny FBI, CIA ary ny NSA. Tahaka izany ihany koa ny amin'ireo tambajotra sosialy. Tsy ho tratranao avokoa ny sioka tsirairay, tsy ho voadionao ny sehatra hoan'ny daholobe, ary raha mahavita mamafa zavatra aza ianao, misy foana ny miraiki-tapisaka (cache) ao amin'ny Google sy ny Yandex. Sakano ny mirai-tapisaka fa mbola mipoitra indray ny fampitan-kafatra (repost) sy ny pikantsary.
Izany no mahatsara an'ny Facebook sy Vkontakte, hoy ianao. Saingy ahoana no fomba hahazoantsika vaovao mahaliana avy amin'ny FSB, FSO, sy ireo fikambanana miafina hafa ? Oadray, tsotra fotsiny ! Any amin'ireny NSA na FSB ireny, dia hisy Snowden tsirairay avy. Amin'ireny tetikasa midadasika ireny, tsy sarotra ny hahita iray.
Amin'ny fampiasana ny aterineto, dia afa-misisika mijery izay miafina amin'ny fiainantsika tsy tafiditra ny tany ivelany taloha ny fitsikilovana ataon'ny fanjakana. Rehefa mandrakitra ny fitondratenantsika amin'ny aterineto isika, dia hahita ny fizotram-piainantsika ny manampahefana ary mahafantatra antsika kokoa noho ny fahafantarantsika ny tenantsika. Raha afaka mampiseho ny fikarohan'i Kinsey fa hafa tanteraka noho izay nofaritan'ny nentim-paharazana ny fitondratenan'olombelona, inona no azon'ny PRISM sy SORM lazaina antsika momba ny “fihetsika mahery” [extremisme] sy ny “fampihorohoroana”? na ny tahan'ny fanaratsiratsiana an'i Vladimir Putin ? Dia ho inona tokoa moa izany no mety ho apoitran'ny fahapotehan'ny fiainana manokana hatrany ifotony amin'ireo karazana fitondrantena politika rehetra?